विचार/दृष्टिकोण « GDP Nepal
फूल चोरिएपछि पशुपतिका सदस्यसचिवले लेखेः भगवान हामीलाई सद्बुद्धि दिनुहोस् !
काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको फूल चोरी भएपछि जो कोहीको पनि मन दुख्नु स्वाभाविक हो । यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वलाई भव्य बनाउन खटिएका अधिकारीहरुको महिनौंदेखिको मेहनत शनिबार एकाविहानै खेर जाँदा
योगेश भट्टराईले बेइज्जत गरेका छैनन्, विदेशीले वास्तै नगरेपछि कसरी बेइज्जत हुन्छ ?
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले आगलागीले पीडामा रहेको अष्ट्रेलियामा नेपाल भ्रमण वर्ष प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गरेर मुलुकको बेइज्जत गरेको आरोप लागिरहेको छ । मन्त्री भट्टराईले यसको खण्डन
काठमाडौं । युवा अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारीले मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा कुनै इच्छाशक्ति नै नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको विकास नहुनुमा आम नागरिकको कुनै भूमिका नरहेको
खोजी रिपोर्टिङले दिएको झुट सन्देश, जसलाई डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिए यस्तो जवाफ !
काठमाडौं । बालबालिकामा विद्यमान कुपोषण र गरिवी विरूद्धको राष्ट्रिय अभियान बलियो नेपाल सुरू गर्ने अभियन्तामध्येका प्रमुख अर्थात संस्थाका अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लले यस अभियानका सम्बन्धमा मुलुकका केही टाइकुन मिडियाले गरिरहेको
सृजना राणा होटल संघ नेपाल नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा अग्रणी भूमिका निभाएको एक महत्वपूर्ण संस्थाको रुपमा विगत ५३ वर्षदेखि आफ्ना सदस्यहरुको हक, हित तथा स्वार्थको वकालत गर्दै आईरहेको छ । अत्यन्तै
भिजिट नेपालको प्रवर्द्धनका लागि ललितपुर उवासंघले वाकाथन गर्दै
ललितपुर । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले भिजिट नेपाल २०२० को प्रवद्र्धनका लागि वाकाथन कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ । संघले आउँदो असोज ४ गते ललितपुरका विभिन्न सम्पदास्थल समेट्दै १९ किलोमिटर
डा. पोषराज पाण्डे सरकारले हालै ल्याएको आयात प्रतिस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजनामा समाविष्ट केही प्रावधानले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको छ । राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको महाशाखा होइन र यसलाई सरकारले निर्देशन
सरकारले आगामी वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न विस्तारित मौद्रिक नीतिको विकल्प छैन । अहिलेको अवस्थामा ‘कन्ट्राक्सनरी’ मौद्रिक नीति आयो
उपत्यका वाहिरका धेरै जनसमुदायमा गुठी नभएपनि आफ्नो संस्कृति, जात्रा, पर्व आदि सबै चल्ने हुन्छ । तर उपत्यकाभित्र गुठीविना यहाँका बहुसंख्यक जात्रा, संस्कृति, पर्व आदि केही पनि चल्दैन । उपत्यकाका नेवार